Wasiirka Arrimaha dibada Masar oo soo gaaray Muqdisho iyo Safaarada Masar oo dib loo furayo – idalenews.com
Wasiirka Arrimaha dibada Masar Maxamed Kaamil Caamir ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya, iyadoo si diiran loogu soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Mr Caamir iyo wafdigiisa ayaa kula kulmay Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana ay ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii Masar ay gacan uga geysan laheyd taageerida Hey’adaha dowladda.
Kuxigeenka Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Arrimaha dibada Fowziyo Yuusuf ayaa sheegtay in dowladda Masar ay u muujisay waxqabadkooda, iyadoo xustay inay ka qeyb qaadan doonto taageero dhinacyo badan, sida Nabadgelyada, Gaashaandhiga, Caafimaadka, Waxbarashada iyo ko u qaadista tayada hey’adaha dowladda.
Ms Fowziyo ayaa sheegay in Masar ay tahay dad walaalo ay yihiin, waxaana ay tilmaamtay inay ku faraxsan tahay heshiiska ay kala saxiixdeen, isla markaana wixii haatan ka dambeeya ay safaaradooda si rasmi ah u furan doonaan.
Sidoo kale Wasiirka Arrimaha dibada Masar ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in magaalada Muqdisho uu yimaado, si dib loogu soo celiyo xiriirka kala dhaxeeya Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in xiriirkan uu sal u lahaan doono xiriiradii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Masar sanadihii lixdameeyadii.
Waa booqashadii u horeysay oo Wasiir ka tirsan dowladda Masar uu Muqdisho yimaado, muddo ka badan labaatan sano.